ကျဆုံး သွားတဲ့ သူရဲကောင်းကိုစည်သူ ရဲ့ နာရေးကို ကိုယ် တိုင် သွားရောက်ပြီး အလှူငွေနဲ့လိုအပ်တာတွေ လှူဒါန်း ခဲ့ တဲ့ ဟိန်းဝေယံ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကျဆုံး သွားတဲ့ သူရဲကောင်းကိုစည်သူ ရဲ့ နာရေးကို ကိုယ် တိုင် သွားရောက်ပြီး အလှူငွေနဲ့လိုအပ်တာတွေ လှူဒါန်း ခဲ့ တဲ့ ဟိန်းဝေယံ
ကျဆုံး သွားတဲ့ သူရဲကောင်းကိုစည်သူ ရဲ့ နာရေးကို ကိုယ် တိုင် သွားရောက်ပြီး အလှူငွေနဲ့လိုအပ်တာတွေ လှူဒါန်း ခဲ့ တဲ့ ဟိန်းဝေယံ
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင်မင်းသား ဟိန်းဝေယံကတော့ ဇာတ်ကားတွေ တော်တော်များများရိုက်ကူးထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့တစ်ခဲနက် အချစ်တွေကိုပါ အခိုင်အမာရရှိထားကာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည် နေသူပါ..။ ဟိန်းဝေယံကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ ပြည်သူတွေမဲ့အတူ ရပ်တည်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်သလို လမ်းပေါ်ထွက်သူရဲ ကောင်း တွေနဲ့ ကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းပြည်သူတွေအတွက်လည်း လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်..။
လှူဒါန်းမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့ ဟိန်းဝေယံ ကတော့ လူထုလှုပ် ရှားမှုမှာ အသက်ပေးကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုစည်သူရဲနာရေးကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကာ ဖေးမကူညီမှုတွေနဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်..။ ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကိုစည်သူရဲ့နာရေးကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ပြီး ပရိက္ခရာပစ္စည်းတွေ အလှူငွေတွေအပြင် စားသောက်စရာတွေ ပေး အပ် လှူ ဒါန်းရင်း ကျန်ရစ်သူမိသားစုကိုလည်း အားပေးစကားလေးတွေ နဲ့ ဖေးမကူညီမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ..။
“အသက်ဆုံးရှုံးသွားသော ပြည်သူ့ သူရဲကောင်း ကိုစည်သူ၏ မိသားစုထံသို့ ပရိက္ခရာ(၈)ပါး အလှူငွေ(၅)သိန်းနှင့်စားသောက်စရာများ သွား ရောက်ကူညီလှူဒါန်းဖြစ်ပါတယ်.. မိသားစုနှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ… ကိုစည်သူ ကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ရှိပါစေ.. 🙏🙏🙏 အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် ). .” ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဖေးမခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှထားတာပါ..။အခုလိုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ပြီး တတ်နိုင်သလောက်ဖေးမကူညီမှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ဟိန်းဝေယံကို ပရိ သတ် တွေကလည်း အားပေးစကားလေးတွေပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..
သတင်းအရင်းမြစ်: Heinn Wai Yan’s Fb Acc
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား ဟိန္းေဝယံကေတာ့ ဇာတ္ကားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား႐ိုက္ကူးထားၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕တစ္ခဲနက္ အခ်စ္ေတြကိုပါ အခိုင္အမာရရွိထားကာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ ေနသူပါ..။ ဟိန္းေဝယံကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနေတြမွာ ျပည္သူေတြမဲ့အတူ ရပ္တည္ကာ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ ျပဳလုပ္သလို လမ္းေပၚထြက္သူရဲ ေကာင္း ေတြနဲ႔ က်ဆုံးသြားတဲ့သူရဲေကာင္းျပည္သူေတြအတြက္လည္း လႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္..။
လႉဒါန္းမႈေတြဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဟိန္းေဝယံ ကေတာ့ လူထုလႈပ္ ရွားမႈမွာ အသက္ေပးက်ဆုံးသြားတဲ့ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုစည္သူရဲနာေရးကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ကာ ေဖးမကူညီမႈေတြနဲ႔ လႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္..။ က်ဆုံးသြားခဲ့တဲ့ကိုစည္သူရဲ႕နာေရးကို ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ၿပီး ပရိကၡရာပစၥည္းေတြ အလႉေငြေတြအျပင္ စားေသာက္စရာေတြ ေပး အပ္ လႉ ဒါန္းရင္း က်န္ရစ္သူမိသားစုကိုလည္း အားေပးစကားေလးေတြ နဲ႔ ေဖးမကူညီမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ..။
“အသက္ဆုံးရႈံးသြားေသာ ျပည္သူ႔ သူရဲေကာင္း ကိုစည္သူ၏ မိသားစုထံသို႔ ပရိကၡရာ(၈)ပါး အလႉေငြ(၅)သိန္းႏွင့္စားေသာက္စရာမ်ား သြား ေရာက္ကူညီလႉဒါန္းျဖစ္ပါတယ္.. မိသားစုႏွင့္ထပ္တူဝမ္းနည္းရပါတယ္ခင္ဗ်ာ… ကိုစည္သူ ေကာင္းရာဘုံဘဝေရာက္ရွိပါေစ.. 🙏🙏🙏 အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္ ). .” ဆိုၿပီး ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေဖးမခဲ့တဲ့ပုံရိပ္ေတြကို ေဝမွ်ထားတာပါ..။အခုလိုအခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူရပ္တည္ၿပီး တတ္ႏိုင္သေလာက္ေဖးမကူညီမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ဟိန္းေဝယံကို ပရိ သတ္ ေတြကလည္း အားေပးစကားေလးေတြေျပာထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္..
သတင္းအရင္းျမစ္: Heinn Wai Yan’s Fb Acc
Previous post နိူင်ငံတော် သစ္စာဖောက် မှု လို့ ကြေညာခြင်း ရဲ့ နောက်ကွယ် က DR.SASA ရဲ့ လုပ် ဆောင် နိုင်စွမ်း တွေ
Next post ပုဂံ ညောင်ဦး က အစ်မတစ်ယောက် ကို အိမ်မက် လာ ပေး ခဲ့တဲ့ မောင်ခန့်ငြားဟိန်း